एमालेका यी सांसदले किन गरे आफूलाई केही दिनका लागि काठमाडौंको मेयरको जिम्मेवारी दिन माग ? – Annapurna Post News
एमालेका यी सांसदले किन गरे आफूलाई केही दिनका लागि काठमाडौंको मेयरको जिम्मेवारी दिन माग ?
June 10, 2022 sujaLeaveaComment on एमालेका यी सांसदले किन गरे आफूलाई केही दिनका लागि काठमाडौंको मेयरको जिम्मेवारी दिन माग ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका एक सांसदले केही दिनका लागि काठमाडौं महानगरपलिकाको मेयरको जिम्मेवारी दिन माग गरेका छन् । एमाले सांसद रामबीर मानन्धरले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा केही दिनका लागि आफूलाई दिन माग गरेका हुन् ।
सांसद मानन्धरले प्रतिनिधीसभाको बैठकमा बोल्दै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफूलाई दिन माग गरेका छन् । उनले आफू पनि महानगरपालिकाको मेयरको आकांक्षी भए पनि टिकट नपाएको उल्लेख गर्दै संसदले आफ्नो नेतृत्वमा फोहोर व्यवस्थापन समिति बनाए काम गरेर देखाउने बताए ।
“फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने मै हुँ, मेयरको लागि म पनि आकांक्षी थिएँ, हुन सकिन । संसदले मेरो अध्यक्षमा फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति गठन गरोस् । फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सक्ने मै हुँ समिति बनाओस् । यो व्यवस्थापन मैले गर्न सक्छ,” संसदको बैठकमा उनले भने । मानन्धरले मेयरको टिकट नपाएपछि एमालेमा अन्तरघात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। यही वर्षको बजेटबाट जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्नका लागि थापाले माग गरेका हुन्।
शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी हुँदै थापाले बजेट माग गरेका हुन्। स्थानीयहरुले तत्काल विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले काम प्रारम्भ गर्ने लिखित निर्णय गर्न सुझाए।
सजिलो छैन हर्क साम्पाङलाई, रफ्तारमा अगाडी बढिरहेका बेला एमालेले लगायो ब्रेक
एमालेले व्यावसायिक खेती गर्न चाहनेलाई भूमि बैंकमार्फत आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने